हाम्राे पिपलबाेट » ब्यावसायीक सुरक्षानै पहिलो एजेण्डा हो , वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदार : अधिकारी ब्यावसायीक सुरक्षानै पहिलो एजेण्डा हो , वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदार : अधिकारी – हाम्राे पिपलबाेट
ब्यावसायीक सुरक्षानै पहिलो एजेण्डा हो , वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदार : अधिकारी
२०५४ सालदेखी कोहपुरमा व्यवसाय गर्दै आइरहेका एक कुशल व्यवसायीको नाम हो तेज प्रसाद अधिकारी । लामो समयदेखी उद्योग वाणिज्य संघको पदिय जिम्मेवारी समाल्दै सामाजिक क्षेत्रमा समेत उल्लेखनिय योगदान पु¥याएका व्यक्ति हुन । २०५० सालदेखी शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै २४ वर्षको लामो अनुभव अधिकारी संग रहेको छ । हाल कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको फागुन २७ गते निर्वाचनलाई लक्षित गरी साझा समावेशी प्यानलको तर्फवाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा तेज प्रसाद अधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा गरिएको छ । निर्वाचनको तयारी र साझा समावेशी प्यानलको एजेण्डाहरुको विषयमा हाम्रा पीपलबोट दैनिकका रिर्पोटर स्याम विष्टले गरेको सक्षिप्त कुराकानी :
आज भोली के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको ९ औँ अधिवेसन आउदै छ । यही अधिवेसनको तयारीमा जुटेका छौं । ब्यापारी, उद्योगीहरुको माझमा पुगीरहेका छौँ । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पुगेर गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा सुझावहरु पनि संकलन गरीरहेको छु । साथै कोहलपुर क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीहरु संचालन भएका तर दर्ता नबिकरणमा नभएका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुझाब, परामर्श दिदै अगाडी बढेका छौँ ।
यहाँले उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको कुरा बताउनु भयो । यहाँ स्वयम साझा समावेशी प्यानलको नेतृत्व गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ । खासमा तपाईको उम्मेदवारी किन ?
सही प्रश्न गर्नु भयो । कोहलपुर क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्गल विच भागमा रहेको छ । यसले गर्दा कोहलपुर बजारको प्रभाव देशैभर पर्छ । कोहलपुर क्षेत्रको विकास संग उद्योग वाणिज्य संघ जोडीन्छ । यहाँको ब्यापार ब्यवसाय फस्टायो भनेनै विकास र सम्वृद्धि सम्भव छ । पहिलो कुरा त उद्योगी ब्यवसायीहरुको अधिकारको लागी म नेतृत्वमा आउन खोजेको हु , त्यस अर्थमा मेरो उम्मेदवारी घोषणा भएको हो । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको गरिमा जोगाउन छ । यहाँका सवै ब्यवसायीहरुको अभिभावक हो उद्योग वाणिज्य संघ । त्यही अभिभावकत्व प्रदान गर्न मेरो टिम चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो । ब्यापार ब्यवसाय गर्दा हरेक छन समस्याहरु परीरहन्छन् । ति समस्याहरुको पहीचान गरी निराकरण गर्न आवश्यक छ । ब्यवसायमा नयाँ पुस्ता पनि आईरहेको छ । त्यो नयाँ पुस्तालाई ब्यापार ब्यवसाय गर्दा ब्यावसायीक योजना निर्माणमा समेत हाम्रो सहयोग आवश्यक पर्छ । हामी ब्यावसायीक योजना निर्माण गरेर ब्यवस्थीत रुपमा ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौं ।
उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामी चाहन्छौं । अहीले उपभोक्ताहरुको नजर स्थानीय बजार भन्दा वोर्डर पारीको बजार तर्फ छ । वोर्डर पारीको बजारमा परनिर्भर रहनु भएका उपभोक्ताहरु त्यहाँ ठगीदै आउनु भएको छ । त्यो कुराको वारेमा उपभोक्ताहरुमा जागरण ल्याउन पनि हाम्रो टिम अघि वढेको छ । ब्यावसायीहरुको हक अधिकार सहीत सिर्जननात्मक र जिम्मेवार ब्यवायी वनाउनको लागी खासमा मेरो र मेरो टिमको उम्मेदवारी पर्छ ।यहाँले स्थानीय बजारमा भन्दा उपभोक्ताहरु सिमा पारीको
भारतीय बजारमा जाने गरेको कुरा राख्नु भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई किन स्थानीय बजारले आकर्षीत गर्न नसकेको
उपभोक्ताहरुमा जागरणको कमी हो । सिमा पारीको बजारमा जाँदा उपभोक्ताहरु सोझै ठगीदै आउनु भएको छ । केही सामानमा सस्तो रेट लगाउने र अन्य सामानहरुमा महङ्गो मुल्य लगाएर भारतीय ब्यापारीहरुले नेपाली उपभोक्ताहरुलाई ठग्दै आएका छन् । म उपभोक्ताहरुलाई एक पटक आफुले किन्ने सामानहरुको हिसाव गर्न आग्रह गर्दछु । गाडी भाडा र त्यहाँ खाने खाजा नास्ताको हिसाव गर्दा घाटानै लाग्छ । यो त भयो सिमा पारी जाँदा उपभोक्ताहरु ठगीने गरेको कुरा, हाम्रो बजार पनि उपभोक्ता मैत्रि वन्न जरुरी छ । उपभोक्ताको चाहना अनुसारको सर, सामान हाम्रो बजारमापाईनुपर्छ । मुल्यमा एकरुपता पनि नभएको गुनासो समय समयमा सुनिने गर्छ । यी हाम्रा चुनौती हुन् । यस्ता चुनौतीहरुको समाधान गर्दै उपभोक्ता मैत्रि ब्यवसाय हाम्रो मुल मन्त्र हो । अनि अर्काे कुरा लमही बजार विस्तार हुन नसक्नु पनि चुनौतीको रुपमा छ । बजार क्षेत्र फैलदै जाने, हाम्रो बजार क्षेत्रमा उपभोक्ता आउनैपर्ने वातावरणको सृजना हामीले गर्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक खानेपानीको धारा, प्रतिक्षालय जस्ता पूर्वाधार नहुदा उपभोक्ता धेरै समय बजारमा अडीन नसक्ने अवस्था छ । यस्ता पूर्वाधारकोे विकास गर्न हामीले पहल गर्नेछौं ।
चुनावी एजेण्डाहरु मुख्य रुपमा के के तय गर्नु भएको छ ?
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको अधुरा रहेका कामहरु पुरा गर्नुछ । हालै संघको भवन निर्माण हुँदैछ त्यस कार्यलाई पनि
निरन्तरता दिनुछ । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुको सहुलियत कर्जा, उद्योगी व्यवसायीलाई टिकाउनका लागि आवश्यक मापदण्डका पुरा गर्नुछ । मुख्यः भन्सार वाट अवैध रुपमा भित्रने सामानलाई नियन्त्रण गर्न अभियानको रुपमा लाग्ने योजना छ । भन्सारमा कडाई नहुदा अवैध रुपमा सर, सामानहरु किनमेल गर्ने प्रवृत्ति वढेको छ । भन्सारलाई कडाई गर्न हामीले पहल गर्नेछौं । कर प्रणालीको वारेमा ब्यापारीहरुले वुझन आवश्यक छ ।त्यसको लागी ब्यापारीहरुलाई अभिमुखीकरण तालीमको ब्यवस्था गरेका थियौ । स्थानीय तहवाट निर्धारण गरिने करलाई ब्यवहारीक वनाउन नगरपालीका संग समन्वय गर्नेछौं । बजारको सरसफाईको लागी नगरपालीका संग समन्वय हुने छ । सडकमा फोहर पाल्ने कार्यलाई निरुत्साहीत गर्दै फोहर ब्यवस्थापनको उपायहरुको वारेमा छलफल गरेर निचोड निकाल्ने तर्फ ध्यान केन्द्रीत हुनेछ ।कोहलपुर नगरपालिकालाई देशकै नमुना नगरको रुपमा विकास गर्न सहयोगी तथा समन्वयको भुमिका निर्वाह गर्नेछौं । कोहलपुरलाई हरियाली संगै क्रिक्रेट मैदान, भ्यू टावरको निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्नेछौं । विकास निर्माण र सार्वजनिक सरोकारका विषय उठान गर्ने साझा थलोको रुपमा उद्योग वाणिज्य संघलाई विकास गर्नेछौं । यी सामाजिक सरोकारका विषयहरु उठान गरीरहदा हामी ब्यावसायीक हक अधिकार र ब्यावसायीक सुरक्षाको सवालमा हाम्रो नेतृत्वदायी भुमिका रहने छ ।
कोहलपुरको सफल ब्यवसायीको रुपमा तपाईलाई चिन्ने गरिन्छ । खासमा तपाईलाई कसरी चिन्ने ?
२०५४ साल देखी कोहलपुरमा न्यू गौरीशकर बिजुली पसल व्यवसाय संचालन गर्दै आएको छ । । यो ब्यवसाय अहिले पनि चलीरहेको छ । ब्यवसाय संगै म सामाजिक क्षेत्रमा क्रियासील छु । कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको २०७४ सालदेखी हाल सम्म महासचिवको पदको जिम्मेवारी समालेर काम गर्ने अवसर मिलेको थियो । त्यतिमात्र हैन २०५० सालदेखी करिब २४ वर्षको शिक्षा क्षेत्रमा जागिरे जिवनको अनुभव रहेको छ । लाइन्स क्लवको २०१४ मा अध्यक्ष भएर सेव गर्ने अवसर मिलेको थियो । बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोहलपुरको संचालनक समितीको सदस्य, बिजुली व्यवसायी बाँकेको कोषाअध्यक्ष ,नेपाल विद्युतिय व्यवसायी महासंघ केन्द्रिय सदस्यमा रहेर सेवा गर्ने शुवर्ण अवसर मिलेको छ ।
ब्यापारीहरुको समस्याहरु के देख्नुहुन्छ ?
खासमा यहाँका ब्यवसायीहरुको साझा समस्या छन् । पहीलो कुरा घर वेटी र ब्यवसायीको विचमा सम्वन्ध, समझदारीको अभाव छ । जतीवेला चाह्यो उतीवेला ब्यवसायीलाई भाँडामा लिएको सटर खाली गराउन दवाव दिने घरवेटीका कारण कतीपय ब्यवसायीहरु समस्यामा पर्नु भएको छ । हेर्दा सानो लाग्यो यो समस्या एउटा
ब्यापारीको लागी सवै भन्दा ठुलो समस्या हो । ब्यवसाय गर्दा घरवेटी संग कती बर्ष सम्म भाँडामा वस्ने हो, कती भाँडा तिर्नुपर्ने हो त्यसको दोहोरो सम्झौताको लागी पहल गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं । अनि अर्काे कुरा एउटा ब्यवसायीले घर वाहाल कर तिर्नेपर्ने वाध्यता छ । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवासायीहरुलाई राज्यको पनी उतिकै दायित्व र जिम्मेवारी रहेको छ । राज्यबाट नै अपहेलित उद्योगी व्यवसायीहरु हुन परेको छ । यस विषयमा आगामी दिनमा हामी स्थानिय तह प्रदेश सरकार संग कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढने योजना बनाएका छौँ ।
अन्तमा केही छुटेका छन् की ?
उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा साझा समावेशी प्यानलको नेतृत्व गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचनमा जाँदैछु सम्पूर्ण उद्योगी ब्यवसायीहरुल अमुल्य मत दिएर विजयी गराउनुहुने छ भन्ने विश्वास रहेको छ ।
२८ माघ २०७७ मा प्रकाशित